“नागार्जुन नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ” « News of Nepal
“नागार्जुन नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ”
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार
वडाध्यक्ष नागार्जुन नगरपालिका–६
काठमाडौंको चक्रपथसँगै नागार्जुन नगरपालिका जोडिएको छ। यो नयाँ नगरमा पुराना बस्ती धेरै छन्। हरेक वर्ष नयाँ बस्ती र घर थपिने क्रम पनि जारी छ। बढ्दो जनघनत्वसँगै नगर र नगरबासीका आवश्यकता र चाहना पनि बढेका छन्। नगरका चुनौती, समस्या समाधानमा भइरहेका प्रयास र भावी योजनाबारे सो नगरको वडा नं ६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकीसँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नागार्जुन नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको १ वर्ष हुन लागेको अवधिमा तपाईंले के–कस्ता काम गर्नुभयो?
जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी निर्वाचित भएको १ वर्ष पुगेको छ। यो नगरपालिका नयाँ भएकाले नगरपालिकाको संस्थागत स्वरूप र ढाँचा बनाउन समय लाग्यो। वडा कार्यालय व्यवस्थित गर्ने काम पनि भयो। सबै वडाबासीलाई पायक पर्ने ठाउँमा वडा कार्यालय राखिएको छ। जनअपेक्षाअनुसारका कामलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
जनअपेक्षाअनुसारका काम के–के पूरा भए त ?
सडक र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि हाम्रो वडा कार्यालयबाट निरन्तर पहल भइरहेको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा सीतापाइला चोकदेखि वडा नं ४ हँदै कोटश्य भैरव सीताराम मावि सडक ८ मिटर बनाउने र सडकको दायाँ–बायाँ पर्खाल लगाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। केही समयभित्रै पीच र आवश्यकताअनुसार ढलान पनि हुनेछ। रिङरोडबाट ३ किलोमिटर नजिकै भए पनि यस वडामा लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातको अभाव खट्किएको थियो। केही महिनादेखि यहाँबाट नियमितरूपमा माइक्रोबस सेवा शुरू भएको छ। बाफलदेखि महाँकालसम्मको सडक विस्तार एवं ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएको सीताराम माविको भौतिक संरचना सुधार र भवनको पुननिर्माण शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी ज्योती प्राविमा बालउद्यान निर्माण हँदैछ भने रामकोटमा रहेको हेल्थपोष्टको स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ। जेष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सुविधा वडाबाटै उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको छ।
सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडक विस्तार कार्य सुस्त भएपछि स्थानीयलाई निकै समस्या भएको पनि चर्चा छ नि?
हो, सडक बिस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा समस्या भएको छ। यो सडकको अधिकांश खन्ड वडा नं ६ भित्रै पर्छ। २०७२ फागुनमा भएको सडक ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७५ साउन दोस्रो हप्ताभित्रमा सकिनुपर्ने हो तर काम धेरै ढिलो भइरहेको छ। पानी आउँदा सवारी गुड्न र स्थानीय बासिन्दालाई हिँड्न धेरै समस्या भएको छ।
सडक बिस्तार शुरू भएको ३ वर्षमा ४० प्रतिशत पनि काम नसकिएकाले यही नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतको संयोजकत्वमा सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडक सरोकार समिति गठन भएको छ।
२०७२ फागुनमा भएको सडक ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७५ साउन दोस्रो हप्ताभित्रमा सकिनुपर्ने हो तर काम धेरै ढिलो भइरहेको छ। पानी आउँदा सवारी गुड्न र स्थानीय बासिन्दालाई हिँड्न धेरै समस्या भएको छ।
नगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, र ८ वडाका वडाअध्यक्ष, सडक सरोकारवाला स्थानीय ५ जना रहने गरी केही दिनअघि समिति गठन गरिएको हो। समितिले ठेकेदार कम्पनी र सडक विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको दबाबपछि सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै १५ दिनभित्रमा सहजरूपमा सवारी साधन गुड्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसो भएन भने नगरपालिका आफैंले रोडा ग्राभेल बिच्छ्याएर सडकको अवस्था सुधार्नेछ। त्यस्तो अवस्था आयो भने सडक विभागबाट स्रोतभर्ना रकम लिइनेछ।
यो क्षेत्रमा खानेपानी समस्या पनि पुरानै होइन र?
हरेक वर्ष वडा र बस्तीमा घरहरू थपिँदैछन्। जनसंख्या बढे पनि खानेपानीको माग हुनु स्वभाविक हो। त्यसैले जनताको मागअनुसार डाँडागाउँ ‘ह्वाइट गुम्बा’ क्षेत्रमा खानेपानी ट्यांकी निर्माण हँदैछ। त्यसैगरी कसारथोक क्षेत्रमा राधाकृष्ण खानेपानी उपभोक्ता समितिको लागि बजेट व्यवस्था गरी खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको छ। खरिटारलगायतका बस्तीमा ढल व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ।
ह्वाइट गुम्बा र डाँडागाउँको पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्न नगरपालिकाले के गरिरहेको छ?
नागार्जुन नगरपालिकाका सुन्दर प्राकृतिक मनोहरस्थल धेरै छन्। त्यसमा पनि डाँडागाउँमा अवस्थित ह्वाइट गुम्बा क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको धरोहरका रूपमा रहेको ह्वाइट गुम्बा २०७२ को भूकम्पले क्षति भएपछि बन्द गरिएको छ।
मर्मत सम्भारका लागि सो गुम्बाका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौं। छिटोभन्दा छिटो गुम्बा सञ्चालन गर्ने पहल भइरहेको छ। डाँडागाउँलाई नगरकै पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न होमस्टे सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने र समूह गठन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसबाहेक डाँडापौवामा गणेशमान पार्क निर्माण हँदैछ। १७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने पार्क नागार्जुन नगरपालिकाको गौरवको आयोजना हो। आगामी २ वर्षभित्रमा धेरै परिवर्तन महसुस गर्न सकिनेछ।
कुनै बेला आसपासका डाँडापाखामा साइक्लिङ रुट बनाउने चर्चा पनि थियो।
अहिले के भइरहेको छ?
नगरपालिका यसबारेमा ज्यादै सकारात्मक छ। नगरपरिषद्बाट ह्वाइट गुम्बा क्षेत्र डाँडागाउँ घट्टेखोला हुँदै थाप्ले भीमढुंगा नर्सरी भञ्ज्याङबाट स्वीजरल्यान्ड पार्कसम्मको क्षेत्रलाई साइक्लिङ रुटका रूपमा विकास गर्ने योजना पास हँदैछ। पर्यटन विकासका लागि एकअर्को वडाबीचमा छलफल पनि हुने गरेको छ। यहाँका डाँडापाखालाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नमूना पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय स्थापित गर्न नगरपालिका र वडाले छिटै नै महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैछन्।
दुई तिहाइले सार्नसक्ने भएपछि प्रादेशिक राजधानी
संस्कार र पहिचान मेटेर कुन समाजबाद
छुवाछुत र भ्रष्टाचार मुक्त नगरको परिकल्पना
भोट माग्दा जनतासँग गरेका बाचा पुरा
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा बजेट प्रमाणीकरण, साउन १ गतेबाट लागु हुने
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत २४सै..
लडे पोल, बिग्रिए सडक, छैन बिजुली
भोलि लाग्दैछ खण्डग्रास चन्द्रग्रहण, चार राशीलाई..
कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि बाढीपीडित चिल्लै
बनेपाको पाँचौ नगर सभा सम्पन्नः ‘म बनाउँछु, मेरो बनेपा’
मेयर आफ्नै अडानमा, नीति तथा कार्यक्रम अलमलमा
पहिरोले मृत्यु भएका परिवारलाई घरमै राहत
‘दुःख बाँडौ सुःख साँटौ’ भन्दै जुट्यो नेविसंघ
बाढीपहिरो अपडेटः अहिलेसम्म ६७ जनाको मृत्यु
लोपोन्मुख कौरा नाचको संरक्षण गर्न पहल
बुटवल–पाल्पा सडकमा जोखिम कायमै, होसियारी अपनाउन सडक कार्यालयको आग्रह
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गराउन सिट्टी जूलूसः फोटो फिचर